ဗေဒင် Archives - Online Bunner
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း… (၁၈.၈.၂၀၁၉ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၉ထိ)
August 18, 2019 Online Bunner 0
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၈.၈.၂၀၁၉ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၉ ထိ) ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၂၀၁၉ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မှ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ထိ) တနင်္ဂနွေ တနင်္လာ […]
အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟော
အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော ၁။ ကျောကုန်းလှုပ်မူ အဝတ်ရမည်။ ၂။ ကိုယ်လှုပ်မူ မယားနှင့်အတူ စကားဆိုရမည်။ ၃။ ခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်။ ၄။ ချက်လှုပ်မူ နှစ်လိုဖွယ်သော ဥစ္စာ ရမည်။ ၅။ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။ ၆။ နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူများမည်။ ၇။ နှလုံးသားလှုပ်မူ […]
ပျိုမေတို့သိချင်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေရဲ့မွေးလအလိုက် ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
ပျိုမေတို့သိချင်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေရဲ့မွေးလအလိုက် ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ပျိုမေတို့ ကိုယ့်ချစ်သူဘယ်လမှာမွေးလဲဆိုတာသိရုံနဲ့ သူဖွင့်မပြောတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့၊ အကျင့်စရိုက်တွေကို သိနိုင်တယ်နော်။ ကဲ ကိုယ့်ချစ်သူမွေးလကို ရှာပြီး ကိုယ်သိချင်တဲ့ သူ့အကြောင်းလေးကို ဖတ်လိုက်ရအောင်။ (၁)- ဇန်နဝါရီ သင့်ချစ်သူက ဇန်နဝါရီလဖွားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင်က ကံအရမ်းကောင်းတဲ့သူပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇန်နဝါရီလဖွားတွေက အချိန်တိုင်းမှာ […]
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏တပည့်ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ တစ်ပါတ်စာ မနောမယ ဟောစာတန်း
August 14, 2019 Online Bunner 0
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ( သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ) ဆရာဇင်ယော်နီ ရဲ့ တပတ်စာ […]
စိတ်နာသွားရင် တစ်သက်လုံးပြန်လှည်မကြည့်တဲ့ အင်္ဂါ
အင်္ဂါ “သားသ္မီးတွေရဲ့အားသာချက်ကလူအများက ချစ်ခင်အောင်နေတတ်တာပါပဲ. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှလိုက်မမှီအောင် ချစ်တတ်ကျတယ်.. ချစ်သူအတွက်ဆိုရင် ကောင်ကင်ကို ဒူးနဲ့တိုက်ရရသူရဲကောင်းကြီး လုပ်ချင်တာ အဂါင်္သာသ္မီးတွေပါ ဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ၊ မျက်ရည်လွယ်တယ်..ကီစ္စတစ်ခုကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့..တမြည့်မြည့် ခံစားနေတတ်ပြန်တယ်..ဟာသပြောပြီး ပြုံးနေတတ်ပေမယ့်..ရင်ထဲက ကြိတ်ငိုနေတတ်တယ် စိတ်နာအောင်တော့ သွားမလုပ်မိပါစေနဲ့..ဒူးထောက်တောင်းပန်တောင် တစ်သက်လုံး ပြန်လှည့်မကြည်တတ်တော့ပါဘူး..သူတိုကို သွားမကျောမိပါစေနဲ့..ကိုး ဆယ်ဆလောက် ပြန်ချေ တတ်ကျလို့ပါ..မိသားစုအရေး […]
အမြဲလိုလို အနက်ရောင်အင်္ကျီ ဝတ်တတ်သူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အကျင့်စရိုက်များ
August 9, 2019 Online Bunner 0
အမြဲလိုလို အနက်ရောင်အင်္ကျီ ဝတ်တတ်သူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အကျင့်စရိုက် လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်တွေမတူကြတာကြောင့် အဝတ်အစားအရောင် ရွေးချယ်မှုမှာလည်း မတူကွဲပြားမှုလေးတွေရှိကြပါတယ်။တချို့က ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရောင် တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ စွဲမြဲဝတ်ဆင်တတ်ပြီး၊ တချို့ကျတော့လည်း အရောင်စုံလေးတွေ ဝယ်ရဝတ်ရတာကြိုက်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေ အဝယ်များပြီး၊ အနက်ရောင်ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆိုသလိုဝတ်တတ်တယ် အနက်ရောင်အဆင်တန်ဆာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါအောင် […]
August 8, 2019 Online Bunner 0
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် လူမှု​ရေး ပရဟိတကိစ္စတွေကိုအားတတ်သရောလုပ်မိနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေချင် နေပြီး အရာရာကိုအကောင်းမြင်နေတတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကတော့ ဟုန်းခနဲမအောင်မြင်ပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း တိုးတတ်မှာပါ။ ငွေကြေးလာဘ်လာဘလဲပေါများနေတတ်တဲ့အချိန်ပါ ငွေအထူးဝင်မယ်။စပ်တူရှယ်ယာအလုပ်တွေ ကောင်းမွန်စွာ တိုးတတ်နေချိန်ပါပဲ။မွေးရပ်နဲ့အဝေးကနေ အကူအညီတွေရလိမ့်မယ်။ မိဘတွေရဲ့ကျန်းမားရေးကို ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကောင်းမယ်။ လူမှူရေးကောင်းမယ်။ အရမ်းရင်းနှီးရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေရဲ့ အကြံဉာဏ်ရယူသင့်တဲ့အချိန်ပါ။ […]
သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ သိကောင်းစရာ( ၁၁ )ချက်…
သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ သိကောင်းစရာ ၁၁ ချက် 💓တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ကြတာ👉သောကြာ 💓ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာအပြင်ပန်းက ဂရုမစိုက်သလို နေတတ်ပီး အမြဲတမ်းတွေးပြီးပူပန်ပေးတတ်တာ👉သောကြာ 💓ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြလေ့မရှိပဲစိတ်ထဲကပဲ ကျိတ်ပြီးဝမ်းနည်းနေတတ်တာ👉သောကြာ😃 💓ဖြစ်လာသမျှအရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲသလိုဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုလဲကြိုပြီးစဉ်းစားတတ်လေ့ရှိတာ👉သောကြာ😃 💓အပြင်ပန်းကြည့်ရင်မာနကြီးတယ်လို့် ထင်ရလောက်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်မှ ပေါတောတောလေးမှန်းသိရတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေတစ်ယောက်ထဲပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကို သဘောကျတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ရှုပ်ရမယ့်အရာတွေကို သိပ်မတွေးပဲ […]
မျက်နှာနှင့်နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ပါရှိခဲ့ရင်
မျက်နှာနှင့်နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်? ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ သူများကို […]
စနေ သားသမီးတွေအတွက်ကတော့ ဒီနှစ် (၂၀၁၉) ခုနှစ်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အချစ်ရေး ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် ယတြာ လေးပါ မျှဝေပေးလို“က်ပါတယ်နော် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ကံကောင်းစေသော နေ့သားများတွင် စနေသားသမီးများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ယခု နှစ်တွင် စနေသားသမီးများသည် […]